घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू Rhys विलियम्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
राइज विलियम्सको जीवनी उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवन को बारे मा तथ्यहरु चित्रण।
संक्षेपमा हामी तपाईंलाई प्रस्तुत गर्दछौं, एक अंग्रेजी पेशेवर फुटबलरको ईतिहासबाट प्रेरित Jurgen Klopp गरेको लिभरपूल। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिनहरु बाट शुरू हुन्छ जब उनी प्रख्यात भए। तपाइँलाई राइस विलियम्सको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवनको चित्रण सारांश छ।
प्रारम्भिक जीवन र राइज विलियम्सको उदय।
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ उसको बेबी फेस छ - भ्यान डिजकको पर्यायवाची दुबै दुबै रूप र चरित्रमा। सम्मानको बावजुद, हामी याद गर्छौं कि धेरै प्रशंसकहरूले राइज लाइफ स्टोरीको संक्षिप्त संस्करण देखेका छैनन्। हामी केवल तपाइँको लागी, उनको आकर्षक सम्झना तयार गरीएको छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
राइस विलियम्स बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उहाँ उपनाम लिनुहुन्छ - बच्चा अनुहार। राइस विलियम्सको जन्म फेब्रुअरी २००१ को तेस्रो दिनमा इ England्ल्यान्डको प्रेस्टन शहरमा भएको थियो। ऊ आमा र बुबाको लागि जन्मेको थियो जुन उसले अझै बताउँदैन।
Feet फिट inches इन्च ताराले आफ्नो शुरुको वर्ष प्रिस्टनमा बिताए। सानो छँदादेखि नै उनी फुटबलको प्रेममा डुबे। प्रायः फुटबल प्रतिभा जस्तै, रेलाई थाहा थियो कि ऊ फुटबल स्टार हुन कटौती गरियो। यसैले, अंग्रेजी प्रेस्टन को शहर उसलाई यो दिशा मा काम गर्न मद्दत गर्‍यो।
टेल फुटबलर बेलायतको प्रेस्टनमा हुर्किए।
राइस विलियम्स परिवार पृष्ठभूमि:
शिशु अनुहारको शीर्ष फ्लाइट स्टार बन्नको यात्रा एक्लो पथमा गरिएको थिएन। उसलाई उसको मध्यमवर्गीय अभिभावकको समर्थन थियो। सराहनीय कुरा, तिनीहरूले उनको खुशीलाई प्राथमिकता दिए। साथै, आमा र बुबा आफ्नो बच्चाले चाहेको जेसुकै कुरा प्रदान गर्न सजीलो उपलब्ध थिए।
राइस विलियम्स परिवार उत्पत्ति:
तपाईंले याद गर्नुभयो? ... प्रेस्टन-जन्मेको स्टारलेटको पहिलो नाम वेल्श लाग्दछ। यो एक उत्कृष्ट सूचक हुन सक्छ जहाँ उसको परिवार जरा स्थापित छ। किनकि वेल्सलाई अ with्ग्रेजीसँग भ्रममा पार्नु एकदमै सजिलो भएको छ, त्यसैले विलियम्स एक बेलायती तारा हो भन्ने कुरा याद गर्नु उचित हुनेछ।
Rhys विलियम्स अनटोल्ड फुटबल कहानी:
जवान १० बर्षको उमेरमा, उनका आमाबुवाले उनलाई लिभरपूल एकेडेमीमा जान सहयोग गरे। यो उसलाई मन पराउने क्लब थियो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, रातो युवा प्रणालीको एक हिस्सा भएकोले उसलाई उद्देश्यको भावना प्रदान गर्‍यो।
हेर्नुहोस् राइस विलियम्सले लिभरपूलको साथ पहिलो करारमा हस्ताक्षर गर्दै थिए।
क्लबको श्रेणीको माध्यमबाट उनको बृद्धि बीचमा, विलियम्सले क्लब र कन्ट्री दुबैका लागि उछाल र बाउन्डमा प्रगति रेकर्ड गरे। तपाईं feet फिट inches इन्च डिफेन्डर यंग लायन्सको साथ फिचर गर्न सक्नुहुनेछ कर्टिस जोन्स र Bukayo Saka?
उनी जवान सिंहहरूमध्ये एक थिए।
Rhys विलियम्स बायोग्राफी - प्रसिद्ध कहानी को लागी:
रेडसँग उसको युवा क्यारियरको चरम सीमामा, बेबी फेसले २०१ 2019 मा एफए युवा कप जित्यो। यो उपलब्धि महत्वपूर्ण थियो किनभने २०० 2007 पछि रेड्स पहिलो पटक प्रतियोगिता जित्यो। त्यसपछि, छिटो उठ्ने युवालाई पठाइयो नन-लीग क्लब किड्डरमिन्स्टर ह्यारियर्सलाई 2019ण अगस्त २०१ XNUMX मा।
कसले रेडहरूलाई एफए युवा कप जित्न मद्दत गर्दछ हेर्नुहोस्।
जब गइरहेको छ कठिन भयो:
यो याद राख्नु सार्थक छ कि ऊसँग एग्बरो स्टेडियममा कठिन समय थियो। पछि विपक्षी खेलाडीहरूले उनलाई उनीहरूको उच्च शारीरिकताका साथ बदमाश गरे। साथै, विलियम्सले हानी गरे र उनको नाक भाँचे। यद्यपि उनले अनुभवबाट शक्ति निकाले र महान् प्रविधिको साथ कुशल खेलाडी भए।
राइस विलियम्स बायोग्राफी - फेम टू फेम स्टोरी:
जब केन्द्र फिर्ता आफ्नो अभिभावक क्लब फर्के, तिनीहरूले चाँडै उसलाई एक सम्झौता हस्तान्तरण र पहिलो-टीम अवसरहरू। प्रस्ताव तथ्य संग अप्रबन्धित थियो Fabinho र भान डिजक घाइते भएको थियो। अवसरको फाइदा उठाउँदै विलियम्सले आफ्नो ईएफएल र च्याम्पियन्स लिग डेब्यूमा प्रभावित भए।
सेप्टेम्बरमा कसले द रेड्ससँग उसको पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे हेर्नुहोस्।
सेन्टर पछाडि सफलता उनको दोस्रो च्याम्पियन लीग उपस्थितिको समयमा आयो। उनी घाइते फाबिन्होको th० औं मिनेटको विकल्पको रूपमा आएका थिए र लिभरपूललाई ​​एफसी मिडजिलल्याण्डमा २-०को जितको रेकर्ड गर्न सहयोग गरे।
त्यो खेलमा विलियमको प्रदर्शनले उहाँलाई धेरै प्रशंसकहरू बनायो। अचम्म मान्नु पर्दैन जब उनले प्रेससँग कुरा गरे जब उनले टिप्पणी गरे: 'यो मेरो जीवनको सब भन्दा राम्रो रात थियो'। शीर्ष उडान फूटबलमा विलियमको यात्रा मात्र सुरु भएको छ, र सर्वश्रेष्ठको लागि अब सम्म आउन बाँकी छ। बाँकी, हामी भन्छौं, इतिहास हो।
राइस विलियम्स गर्लफ्रेंड र श्रीमती को हुन?
बेबी अनुहार एकल छैन। न त उहाँ विवाहित हुनुहुन्छ। उनीसँग भएका सबै राम्रा प्रेमिका हुन्। उनको नाम Thea स्पेन्सर हो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, lovebirds लगभग समान उचाई को छ र उही उही रंग को रंग। त्यो राम्रो छैन? ओह! ... यो Thea स्पेन्सर आफ्नो पति हुन भन्दा अग्लो छ जस्तो देखिन्छ।
Rhys विलियम्स आफ्नो प्रेमिका, Thea स्पेन्सर संग।
विलियम्सको इन्स्टाग्राम पृष्ठमार्फत एक हेराईले प्रकट गर्दछ कि उनीहरूसँग भविष्यको लागि योजनाहरू छन् र उनीहरूले पहिले नै जोडीहरूको लक्ष्यहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसले प्रशंसकहरूको हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछ कि स्पेंसरले लिगमा एक राम्रो भव्य हेर्ने गर्लफ्रेंडहरू मध्ये एक हो। उहाँहरु उनीहरूको प्रेम डु boat्गा बर्थ गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्न सक्दैन।
राइस विलियम्स पारिवारिक जीवन:
बेबी फेसको जीवन र फुटबलमा वृद्धि उसको जीवनका केही विशेष व्यक्तिहरू बिना सम्भव थिएन। तिनीहरू उसको परिवार हुन्। यहाँ हामी तपाइँलाई राइस विलियम्सका अभिभावक र भाईबहिनीको बारेमा तथ्यहरू ल्याउँदछौं। हामी यहाँ उनीहरुका आफन्तहरुको बारे पनि सत्य बनाउनेछौं।
राइस विलियम्स अभिभावकको बारेमा:
सेन्टर बैक बुबा र आमा आफ्ना छोरा एक महान केन्द्र-फिर्ता हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न पर्दा पछाडि वास्तवमै कडा काम गर्दैछन् - भन्दा पनि राम्रो जमाल लसेल्स - कुनै टाढाको समयमा। यद्यपि राइसले उनीहरूको पहिचान प्रकट गर्न सकेनन् वा उनीहरू बीचको सम्बन्धको बारेमा बताइन।
जे होस्, तिनीहरूले उहाँलाई हुर्काउन स्पष्ट काम गरे। विलियम्सका आमा र बुबालाई उनका meteoric सफलता मा गर्व छ। आशा छ, तिनीहरू कहिल्यै उहाँको भलो हुने चासो राख्दैनन्।
राइस विलियम्स भाई बहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
उसको बुबाआमाबाट टाढा, उनी अझै भाइबहिनी छ कि छैन भन्ने कुरा अस्पष्ट छ। साथै, उनको मामा र बुवा हजुरबा हजुरआमाको रेकर्ड सार्वजनिक हुन बाँकी छ। न त उनले आफ्नो काकी, काका, काका, काका, सम्भव भतिजा र भतिजाहरूलाई चिनेका छन्।
त्यहाँ केहि स्टारलेटहरू छन् जुन सही मनोवृत्तिको साथ महत्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्न जान्दछ। विलियम्स ती मध्ये एक हो। उनीसँग फुटबलमा सबैभन्दा मनमोहक मुस्कानहरू छन्। साथै, उहाँसँग ठूलो अन्तरक्रियात्मक सीपहरू छन्।
व्यक्तिगत नोटमा पनि, राईस एक राम्रो श्रोता हुन् जसले धेरै कुरा गर्दैनन्। साथै, उसको राम्रो दिमाग छ। वास्तवमा, फ्यानहरू दिन कहिले रोकिन्छन् Rhys विलियम्स मा Shoutout स्थानीय रेडियो र सोशल मिडियामा किनभने उहाँको व्यक्तित्व दुर्लभ र पेचीला छ।
अन्तत: उसको व्यक्तिगत जीवनमा, feet फिट inches इन्च केन्द्र फिर्ता एकदम आरक्षित व्यक्ति हो। Rhys आफ्नो रुचिहरु र शौक को एक संकेत छैन। आजका दिन, उनले आफ्नो अनुहार कडा पार्छ त्यसैले प्रशंसकहरूले आफ्नो बच्चाको अनुहारको कुनै गलत अर्थ लगाउँदैनन् नौं डिफेन्डर खोज्छन्।
राइस विलियम्स जीवनशैली:
हाम्रो छोराले कसरी आफ्नो पैसा बनाउँदछ र कसरी खर्च गर्छ भनेर हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्न चाहान्छौं, हामी वास्तविक कारणहरूले गर्न सक्दैनौं। उसको कुल सम्पत्ति डिसेम्बर २०२० सम्म समीक्षा अन्तर्गत छ। साथै, लिभरपूलले आफ्नो आम्दानी सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेको छैन।
यद्यपि हामी अनुमान गर्न सक्दछौं कि उसले वार्षिक £ २२226,868। कमाउँछ। यी सबैको सार यो छ, विलियम्स रूढीवादी हो, एक विकास जसले प्रशंसकलाई एक विकल्पको साथ छोडिदिन्छ। यो दृश्य रहेको छ कि उसले महँगो कार, ठूला घरहरू आदि बारे कम चासो राख्छ - कम्तिमा अहिलेको लागि।
राइस विलियम्सको बारेमा अनटल्ड तथ्यहरू:
बाल्यकाल कहानी र जीवनी कथा लपेटेर, यहाँ उहाँको बारेमा थोरै ज्ञात सत्यहरू छन्।
पाउन्डमा आय (£)।
प्रति वर्ष: £ 226,868।
प्रति महिना: £ 18,890।
प्रति हप्ता: £ 4,353।
प्रति दिन: £ 622
प्रति घण्टा: £ 26।
प्रति मिनेट: £ 0.43
प्रति सेकेन्ड: £ 0.007
तपाईं Rhys विलियम्स 'हेर्न शुरू गर्नुभयो पछि बायो, यो उसले कमाएको हो।
फुटबलरहरूले विरलै विश्वासको कुराको बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँदछन्। तसर्थ, उनीहरू विश्वासीहरू हुन् कि छैनन् भनेर ठम्याउन गाह्रो छ। राइस विलियम्स एक विश्वासी हुनुपर्छ। यद्यपि हामी उसले खास धर्मको अभ्यास गर्न सक्दैनौं।
तथ्य # १ - उचाई तथ्यहरू:
२०२०/२०१२ को मौसम अनुसार, राइस विलियम्स सबैभन्दा अग्लो लिभरपूल खेलाडी हुन्। साथमा जोल मटिप, दुबै एक हुपिंग १ 195 meters मिटर उचाई मापन। भर्जिल र एलिसन बेकर रेडहरू मध्ये सब भन्दा अग्लो आउँछ।
तथ्य # १ - उनको प्रोफाइल को बारे मा:
जस्तै पैट्रिक बामफोर्ड, Rhys सँग एक अनौंठो FIFA रेटिंग छ। साथै, ऊसँग 74 XNUMX को सम्भाव्यता छ। तथ्या show्कले देखाउँदछ कि उसले आफ्नो बिन्दुहरू अझ बढी बचाव कार्य दरमा राख्नु पर्छ। आशा छ, रेटिंगहरू सुधार हुनेछ किनकि उहाँ अधिक देखा पर्नुहुन्छ।
आशा छ, उहाँ सुधार गर्न कडा परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ।
राइज विलियम्सको बचपनको कथा प्लस जीवनीमा यस जानकारीमूलक अंश पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। ऊ कसरी गयो गैर लीगमा च्याम्पियन्स लिग एक प्रेरणादायक पाठ हो जुन चमत्कारहरू हुन्छन् जब तत्परताले अवसरको अवसर पाउँछ।
वास्तवमा हामी मिडफिल्डरका आमा बुबालाई उनीहरूको शब्द र काममा सहयोगी गर्दछौं। उहाँ आफ्नो परिवारको प्रेमले बनेको हुनुभयो, उनीहरूको आलिंगनले ढाक्यो र उनीहरूको जीवनबाट प्रेरित भए।
Lifebogger मा, हामी सही र निष्पक्षताका साथ सॉकर कथाहरू प्रदान गर्नमा गर्व गर्छौं। प्रशंसकहरू, कृपया अधिकको लागि हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस् अंग्रेजी फुटबलर कथाहरू.
यदि तपाइँ केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन ठीक लाग्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल सन्देश छोड्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, हामीलाई टिप्पणी सेक्सनमा तपाईको बारेमा के सोच्नुहुन्छ हामीलाई बताउनुहोस्। अन्तमा, राइस विलियम्सको बायोको तपाईंको द्रुत स्वाद मेटाउन हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: राइस विलियम्स।
उपनाम: बच्चा अनुहार
जन्म मिति: फेब्रुअरी २००१ को तेस्रो दिन।
जन्मस्थान: इ England्ल्यान्डको प्रेस्टन शहर।
सेमी मा उचाई: १195 C सेमी
प्रेमिका: Thea स्पेन्सर।
रुचि: साथीहरूसँग ह्या Hang्गआउट गर्दै र भिडियो गेमहरू खेल्दै।
नेट मूल्य: समीक्षा अन्तर्गत।